Alxanka Robot, Robotka Mashiinka Mashiinka, Robotka Xardhay - Jiesheng
Robotyadeenna waxaa loogu talagalay inay ku guuleystaan ​​otomaatiga warshadaha kacaanka oo ay ka go'an tahay inay gacan ka geystaan ​​xallinta caqabadaha ganacsi ee macaamiisha.
Qalabka loo yaqaan 'Yaskawa MOTOMAN-GP25' ee ujeeddada guud, oo leh hawlo hodan ah iyo qaybo muhiim ah, wuxuu dabooli karaa baahiyaha isticmaaleyaal fara badan, sida qabashada, duubista, isku soo ururinta, shiida, iyo ka shaqeynta qaybaha ballaaran.
Robotka buufinta gawaarida MPX1150 wuxuu ku haboon yahay buufinta shaqooyinka yaryar. Waxay qaadi kartaa culeyska ugu badan ee 5Kg iyo dheereynta jiifka ugu badan ee 727mm. Waxaa loo isticmaali karaa wax ka qabashada iyo buufinta. Waxay ku qalabeysan tahay golaha xakamaynta miniaturized DX200 oo loogu talagalay buufinta, oo leh qalab wax lagu barto oo heer sare ah iyo qalab wax lagu baro waxyaabaha qarxa oo aan loo adeegsan karin meelaha halista ah.
Robot-ka yar ee alxanka shaqada ku shaqeeya ee 'MOTOMAN-AR900', 6-dhidibka nooca isku-dhafan ee isku-dhafan, ugu badnaan bixinta 7Kg, dheereynta jiifka ugu badan ee 927mm, oo ku habboon golaha xakamaynta YRC1000, isticmaalka waxaa ka mid ah alxanka qaansada, farsamaynta laser, iyo maaraynta Waxay leedahay xasillooni sare waxayna ku habboon tahay kuwa badan Noocan jawiga shaqada ah, kharash-ku-ool ah, ayaa ah doorashada koowaad ee shirkado badan MOTOMAN Yaskawa robot.
Marka lagu daro alaabooyinka waxqabadka sare leh, waxaan bixinnaa adeegga is-dhexgalka robot la isku halleyn karo, waxaan u shaqeynaa si ammaan ah oo hufan - xitaa xaaladaha aadka u daran.
Isdhexgalka Robot adeeg bixiye
Waxaa la aasaasay Febraayo 23, 2011, Shanghai Jiesheng Robot Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare oo ballaadhan ku takhasustay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka, iyo suuq-geynta qalabka iyo agabyada aaladaha aaladaha warshadaha, alxanka iyo goynta, iyo bixinta adeeg farsamo oo dhameystiran. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay soo saarto shirkadda: aaladaha Yaskawa, unugga shaqada ee alxanka, saldhigga shaqada ee alxanka, qolka shaqada ee alxanka, qalabka alxanka iyo qalabka. Wax soosaarka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa alxanka qaansada, alxanka barta, dhejinta, goynta, maaraynta, palletizing, rinjiyeynta, cilmi baarista cilmiga iyo waxbarista. Bixi naqshadaynta qalabka otomaatiga, rakibidda iyo adeegyada iibka kadib iibinta ee soo saarayaasha qaybaha baabuurta.
Tikniyoolajiyadda Shiinaha ayaa ah tan adduunka ugu wanaagsan siyaasadda MAEDA ee "Lagu Sameeyay Shiinaha" waxaa loola jeedaa fasal sare, geeddi-socod joogto ah oo horumarineed iyo wax soo saar gudaha Shiinaha ah.
Codsiyada loo yaqaan 'Mini Crane' waa kuwo aan xad lahayn. Halkan waxaad ku arki doontaa sawir gacmeedyo sawirro iyo fiidiyowyo ah si aad ugu hesho dhiirrigelinta shaqadaada xigta.
Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Qabashada Gacanta Robot, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Robotka Gacanta otomaatiga ah, 6 Axis Qabashada Robot,